မကြာခင် ကျရောက်တော့မယ့် မွေးနေ့လေးမှာ မြတ်စွာဘုရားထံမှာ မြန်မာပြည်အမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းသွားဖို့ဆုတောင်းနေတဲ့ ဖီလစ်ပိုင်မော်ဒယ် စီနွန်. – Maythadin
မကြာခင် ကျရောက်တော့မယ့် မွေးနေ့လေးမှာ မြတ်စွာဘုရားထံမှာ မြန်မာပြည်အမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းသွားဖို့ဆုတောင်းနေတဲ့ ဖီလစ်ပိုင်မော်ဒယ် စီနွန်.
May Thadin | October 28, 2021 | Cele News | No Comments
Sinon Loresca လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ Catwalk လောကရဲ့ ဆရာတစ်ဆူ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား LGBT မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း ပရိတ်သတ်အားလုံးက အသိအမှတ်ပြုထားကြပါတယ်။
သူဟာ ဒေါက်ဖိနပ်အမြင့်ကြီးတွေ စီးကာ Catwalk လျှောက်ပြရာမှ စတင်ရေပန်းစားလာခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ ရိုးသားပွင့်လင်းမှုကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးကို ဆက်တိုက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အတော်အသင့်ကြာအောင် နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပရိတ်သတ်တွေနဲ့ သူဟာ အတိုင်းထက်အလွန် အပြန်အလှန်
ချစ်ခင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး မြန်မာဟာ သူ့ရဲ့ မွေးရပ်မြေလို့ခံယူထားတဲ့ အထိကို မြန်မာပြည်ကို ချစ်မြတ်နိုးသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ သူဟာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့ မှာ ရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ အချို့သော အကြောင်းကြောင်းများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာသွားရတာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်င့နှင့်ပတ်သက်တဲ့အမှတ်ရများစွာကို နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုလို သူ့ရဲ့ စာမျက်နှာမှာတင်နေတာဖြစ်ပါတယ်
။ယခုလည်း သိပ်မကြာခင်ကျရောက်လာတော့မယ့် သူ့ရဲ့ မွေးနေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံအား အမြန်ဆုံးအေးချမ်းစေလိုကြောင်းနှင့် သူရဲ့ မွေးနေ့ကို မြန်မာပြည်သူများနှင့်
အတူတူဖြတ်သန်းလိုကြောင်း ပြောကြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်တွေကလည်း သူ့ကို လွမ်းဆွတ်သတိရနေကြောင်း အပြန်အလှန်ရေးသားပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
မၾကာခင္ က်ေရာက္ေတာ့မယ့္ ေမြးေန႕ေလးမွာ ျမတ္စြာဘုရားထံမွာ ျမန္မာျပည္အျမန္ဆုံးၿငိမ္းခ်မ္းသြားဖို႔ဆုေတာင္းေနတဲ့ ဖီလစ္ပိုင္ေမာ္ဒယ္ စီႏြန္.
Sinon Loresca လို႔ေျပာလိုက္တာနဲ႕ Catwalk ေလာကရဲ႕ ဆရာတစ္ဆူ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံသား LGBT ေမာ္ဒယ္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ပရိတ္သတ္အားလုံးက အသိအမွတ္ျပဳထားၾကပါတယ္။
သူဟာ ေဒါက္ဖိနပ္အျမင့္ႀကီးေတြ စီးကာ Catwalk ေလွ်ာက္ျပရာမွ စတင္ေရပန္းစားလာခဲ့ၿပီး သူ႕ရဲ႕ ရိုးသားပြင့္လင္းမႈေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္အားေပးကို ဆက္တိုက္ထိန္းသိမ္းထားနိုင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။
သူဟာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အေတာ္အသင့္ၾကာေအာင္ ေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာပရိတ္သတ္ေတြနဲ႕ သူဟာ အတိုင္းထက္အလြန္ အျပန္အလွန္
ခ်စ္ခင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာဟာ သူ႕ရဲ႕ ေမြးရပ္ေျမလို႔ခံယူထားတဲ့ အထိကို ျမန္မာျပည္ကို ခ်စ္ျမတ္နိုးသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိမွာ သူဟာ အဂၤလန္နိုင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ မွာ ေရာက္ရွိေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။သူဟာ အခ်ိဳ႕ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားရတာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္င့ႏွင့္ပတ္သက္တဲ့အမွတ္ရမ်ားစြာကို ေန႕စဥ္ေန႕တိုင္းလိုလို သူ႕ရဲ႕ စာမ်က္ႏွာမွာတင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္
။ယခုလည္း သိပ္မၾကာခင္က်ေရာက္လာေတာ့မယ့္ သူ႕ရဲ႕ ေမြးေန႕မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအား အျမန္ဆုံးေအးခ်မ္းေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ သူရဲ႕ ေမြးေန႕ကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္
အတူတူျဖတ္သန္းလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ပရိတ္သတ္ေတြကလည္း သူ႕ကို လြမ္းဆြတ္သတိရေနေၾကာင္း အျပန္အလွန္ေရးသားေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။
အရင်တုန်းက ယောကျာ်းနောက်လျှောက်လိုက်ရင်း ဒီလိုတွေ ကူခဲ့ဖူးတယ်လို့ဆိုကာ ရိုက်ကွင်းပုံလေးတွေ တင်ပေးလာတဲ့ မင်းသားကြီးနေမျိုးအောင်ရဲ့ဇနီး..